चर्चित गायिका मिलनको मोबाईल र पर्स चोरी “चोर लाई लेखिन यस्तो संदेश” - Kavre Online
गायिका मिलन नेवार अमात्य लुटिएकी छन् । उनको हातबाटै मोबाईल र महत्त्वपूर्ण सामान सहितको ब्याग लुटिएको हो । गत अगस्टको ३१ तारिख बिहिवारका दिन उनी घर फर्किदै गर्दा यो घटना भएको सामाजिक संजाल फेसबुकमा उल्लेख गरेकी छन् । काठमाडौको कुलेश्वरमा अवस्थित मेट्रो अपार्टमेन्ट अगाडिबाट
एक केटाले मोबाईल संगै ब्याग र ब्याग भित्र रहेको लाईसेन्स, ब्लु बुक, एटिएम कार्ड लगायतका ब्यागमा भएका सम्पुर्ण सामान लुटिएको सो पोस्टमा लेखेकी छन् । यस्तै आफू संग कसैको नम्बर नभएको र आफन्तको नम्बर, लाईसेन्स र ब्लु बुक सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै कसैले भेट्नु भएमा आफुलाई फेसबुकमा म्यासेज गर्नुहुन वा प्रहरीकोमा बुझाईदिन अनुरोध गरेकी छन् ।
उनले चोरलाई अरु लगेपनि मोबाईल, लाईसेन्स, ब्लु बुक र एटिएम कार्ड कुनै पनि माध्यमबाट आफुलाई उपलब्ध गराईदिन भनेकी छन् । सो पोस्टको अन्त्यमा उनले “कागजात हेरेर अबस्य चिन्नु भयो होला ! पैसा लगेर सामान कहि छोड्दिनु होला ! चोर जि” लेखेकी छन् । इन्साईदर नेपाल बात साभार ।
मिलन अमात्यको नाममा नेपाली संगीत क्षेत्रमा स्थापित भैसकेकी गायिका अब मिलन नेवारको रुपमा अघि बढ्दैछिन् । मिलन अमात्यका नामबाट गाला रातै, स्लोली स्लोली जस्ता गीत गाएर चलचित्रको पार्श गायनमा समेत स्थान जमाउन सफल गायिका मिलन पूर्वपति मेन्सन अमात्यसंगको डिभोर्सपछि आफ्नै पहिचानका
साथ मिलन नेवारका नामले नेपाली संगीत क्षेत्रमा छाउने भएकी हुन् । मेन्सनले मिलनसंग डिभोर्स भएको केहि महिना मै दोस्रो विवाह गरिसकेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टको नाम पनि आजैबाट परिवर्तन गरी मिलन नेवार बनाएकी छिन् । आफू अब मिलन नेवारको रुपमा अगाडि बढ्ने भनि आफ्नै फेसबुक मार्फत् आफ्ना शुभचिन्तकहरुलाई जानकारी गराएकी छिन् ।
Prevकथाले मागे मलाई ओपन हुन डर छैन
Nextनिद्रा नलागे के गर्ने ? समस्या र उपाए
भारतीय सेनाको आँखा छल्दै पत्रकार यसरी पुगे लिपुलेक (भिडियो)
घाईते भेट्न रवि लामिछाने चितवनका अस्पतालमा, घाइतेसंग बसेर साटे सुखदुःख (भिडियो)